PU Isikhumba Factory, Abahlinzeki - China PU Isikhumba Abakhiqizi
Umkhiqizi wesikhumba se-PU Vegan wezimoto zezimoto
Ekuthuthukisweni kokuqala kobuchwepheshe besikhumba se-PVC, amabhizinisi wesikhumba asekhaya asalele emuva kakhulu e-Europe. Kepha ocwaningweni nasekusebenzisweni kwesikhumba se-PU zokwenziwa, sihambisana nomkhuba wezobuchwepheshe wamazwe omhlaba ngokuqala ekuqaleni, indawo yokuqala ephezulu, isivinini sokuthuthuka okusheshayo, futhi sesibe isikhungo se-PU zokwenziwa kwesikhumba e-China.
Isipele Esingasuki Esenziwe Kabusha Esenziwe Ngesikhumba se-PU Safe no Peel
I-PU isikhumba sokwenziwa, ngokuya ngesakhiwo samakhemikhali, siseduze kwesikhumba semvelo, ngakho-ke ngeke abe lukhuni futhi aqhekeke, futhi ngasikhathi sinye sinezinzuzo zemibala ecebile namaphethini amaningi.
I-PU Leather Microfiber Yezimoto, Isihlalo Semoto Esingenamanzi, Isitoreji Semoto
Ngokuthuthuka okusheshayo kwe-PU (polyurethane) technology yesikhumba yokwenziwa, ezinye izinhlobo ezintsha zemikhiqizo yamazwe ziye zaqala ukusebenzisa isikhumba se-PU zokwenziwa futhi zithambekele ekuziphatheni okuphezulu kwesikhumba se-PU.
Eco-Friendly Polyurethane Vegan Isikhumba Artificial PU Material
Imoto Upholstery PU Material Isikhumba Polyurethane Isikhumba Samanga
Isikhumba sokufakelwa se-PU yinto yokwenziwa eyenziwe ngomuntu ngesikhumba, siqine kakhulu futhi siqinile, futhi asibizi.
I-China Supplies Red PU Artificial Isikhumba Ukuhlobisa
Isikhumba se-pu microfiber synthetic sigcina izici zesikhumba semvelo njengokuphefumula, ukumunca umswakama, okuthambile, ukugqokwa nokunethezeka, njll. Sikunikeza imibala engaphezu kwamashumi amabili ngokuzikhethela kwakho.
Impahla Yesikhumba esezingeni eliphakeme ye-Microfiber Yokusekela
Inamandla amahle okuqina ekushiseni okuphansi, ukumelana okuhle nokuguga okukhanyayo nokuqina kwe-hydrolysis.
Ikhwalithi ephezulu ye-PU Leather Automotive Upholstery Isikhumba
Ohlangothini Double PU Polyurethane Zokwenziwa Isikhumba Moistureproof
PU microfiber zokwenziwa lesikhumba, ukuhlangabezana nesidingo sabantu sobuhle jikelele nokunethezeka kwezinto zangaphakathi, kufaka phakathi izinto zangaphakathi zizizwe zithambile, zikhululekile ukuthinta okucwebezelayo, iphethini nayo yonke idizayini yemoto ngokuvumelana.
Ikhwalithi ephezulu ye-PU Isikhumba Sokwenziwa Sokuhlobisa Kwangaphakathi Kwemoto
PU isikhumba sokufakelwa singahlangabezana nezidingo zokuvikelwa kwemvelo, ngemuva kokumoshwa kwezinto zangaphakathi zezimoto ngeke kungcolise imvelo, kungabuye kusetshenziswe kabusha.
Isikhumba esenziwe ngokwezifiso se-PU impahla yokuhlinzeka ngesikhumba yezimoto ze-Upholstery
Izinto ezintsha zezimoto ze-PU zinezici ezinhle kakhulu zomshini, ukumelana ne-hydrolysis, ukumelana nokushisa, ukumelana ne-oxidation kanye nokumelana nokugqoka kusetshenziswe kabanzi ezindaweni zokubamba zezimoto, izihlalo, izivikelo zeminyango nezinye izinto.